केन्द्रीय समिति गठनमा जसपा भित्र बढयो विवाद - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home Breaking News केन्द्रीय समिति गठनमा जसपा भित्र बढयो विवाद
ठाकुर र महतोको प्रस्ताव महेन्द्र र राजकिशोरद्धारा अस्वीकार
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र केन्द्रीय समिति गठनमा विवाद भएको छ । तत्कालिन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच पार्टी एकीकरण भएको पाँच महिना पुगे पनि विवादकै कारण केन्द्रीय समिति गठन हुन सकेको छैन् ।
जसपा बिधानमा सात सय एक सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउँने उल्लेख गरिएको छ । जसमा समाजवादीको तर्फबाट तीन सय ५० र राजपाबाट तीन सय ५० सदस्य रहने सहमती दुई पार्टीका बीचमा भएको छ ।
तर तत्कालिन राजपाभित्र तिब्र विवाद रहेको छ । विवादकै कारण दुई वटा नामावली तयारी भईरहेको जसपा स्रोतको दावी छ । बबरमहल स्थित राजपाको कार्यालयमा बसेको शिर्ष नेताहरुको बीचमा सहमती हुन नसक्दा दुई वटा नामावली तयारी भईरहेको छ ।
तत्कालिन राजपा नेपालको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य चयन गर्नका लागि अध्यक्ष मण्डलमा रहेका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्रराय यादव र राजकिशोर यादवको बैठक सोमबार बस्यो । तर चार नेताका बीचमा सहमती जुटनन सकेन् ।
जसपा स्रोतका अनुसार ठाकुर र महतोले आफूसंग एक सय आठ राखेर महेन्द्र र भण्डारीलाई ४०/४०, राजकिशोर र अनिललाई २७/२७ सदस्य दिने गरी भागबण्डा गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यो प्रस्तावमा महेन्द्र, राजकिशोर र अनिलको असहमती छ ।
महेन्द्र, राजकिशो र अनिलले ठाकुर र महतोको कोटाबाट घटाएर अन्य चार नेताको कोटा बढाउँनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ठाकुर र महतोको कोटाबाट घटाएर महेन्द्र र भण्डारीलाई ५२/५२, अनिल र राजकिशोरलाई ३८/३८ हुनुपर्ने प्रस्ताव असन्तुष्ट समुहले राखेका छन् ।
छलफलमा अनिल र भण्डारी सहभागि भएनन् । जसपा नेतृ एवं पत्नी डा. डिम्पल झाको उपचारका लागि अनिल नयाँ दिल्लीमा छन् । यस्तै भण्डारी बिरामी भएकाले घरमै आराम गरिरहेका छन् । भण्डारीले दुई मध्ये जुन प्रस्तावमा सहमती भए आफू त्यसैमा सन्तुष्ट रहेको बताउँदै आएका छन् । ठाकुर र महतोले आफूहरुको तत्कालिनन पार्टीको संगठन गाउँ गाउँ सम्म रहेकाले सोही अनुसार सदस्य संख्या अरु भन्दा बढी नै हुुनुपर्ने अडानमा छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस संविधानको सफलताका लागि सबैको अपनत्व गाँस्दै लग्न जरुरी हुन्छ : सभापति देउवा
दुई पार्टी एकीकरण पश्चात बनेको जसपा कार्यकारिणी समितिमा समेत ठाकुर र महतोले मनोमानी गरेको आरोप महेन्द्र, अनिल, राजकिशोरले लगाउँदै आएका छन् । जसपा अध्यक्ष समेत रहेका ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोले पुर्व सहमती अनुसार सदस्य संख्या आफूहरुका लागि नछुटयाएको आरोप लगाउँदै छुटै नामावली तयार गर्ने असन्तुष्ट नेताहरुले जनाएका छन् ।
तत्कालिन राजपाको केन्द्रीय सदस्य आठ सय ६१ थियो । तर अहिले उसले तीन सय ५० केन्द्रीय सदस्य छान्नुपर्ने भएकाले नेतृत्वलाई मिलाउँन सकस भएको छ । समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य चार सय ३१ रहेको थियो । केही निष्कृय तथा केही दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेकाले उसलाई केन्द्रीय सदस्य छान्न सजिलो छ ।
साउन अन्तिम साता सम्पन्न भएको जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठकले जिम्मेवारी बाँडफाँड, पदाधिकारी चयन र नेताहरुको मर्यादाक्रम टुंगो लगाउँन पाँच सदस्यीय पदाधिकारीलाई सचिवालय निर्माण गर्दै जिम्मेवारी दिएको थियो ।
जसपामा अहिले अध्यक्षद्धय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेतात्रयमा अशोक राई, डा. बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र महतो रहेका छन् । यही पाँच जना पदाधिकारी रहने गरी सचिवालय बनाईएको र आवश्यक गृहकार्य गरेर जिम्मेवारी बाँडफाँड, पदाधिकारी चयन तथा नेताहरुको वरियता टुंगो लगाउँन अधिकार दिएको हो ।
तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टी बीच गत १० बैशाखमा रातारात पार्टी एकिरण गरेर जसपाको घोषणा भएको थियो । सचिवालय भित्रै अधिकारको बाँडफाँड बिषयलाई लिएर विवाद हुदै आएको छ ।
बिचार राजधानी समाचारदाता - April 14, 2020
सिंगो विश्व नै महामारीको चपेटामा परिरहेका बेला नेपालीले कोरोना भाइरसबाट जोगिन सचेतनाको सन्देशसहित विक्रम संवत् २०७६ लाई बिदाइ गरी २०७७ लाई स्वागत...
पोखरीमा डुबेकी किशोरी सात घण्टापछि जिउदै निस्किइन् !
Editor-Picks एम के माझी - August 29, 2020
सप्तरी, राजविराज । पोखरीमा डुबेको सात घण्टापछि जिवित्तै बाहिर निस्केको दाबी गर्ने एक किशोरीको अहिले जिल्लाभरि चर्चा भइरहेको छ । ती किशोरी हुन् सप्तरीको...
प्रदेश ३ रासस - March 1, 2020
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका...
बिचार भागवत खनाल - May 29, 2020
यो पनि पढ्नुहोस पुरानै प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन गर्न वरिष्ठ नेता पौडेलको प्रस्ताव